Igatsha elisha leNFP livulwe bumi | IOL Isolezwe
Igatsha elisha leNFP livulwe bumi
Isolezwe / 9 July 2012, 1:31pm /
08/07/12 DURBAN: I NFP inokungaboni ngasolinye neANC ku KENNEDY RD. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
BONISWA MOHALE noNONHLANHLA MKHABELA
KUPHOQELEK E ukuba ubuholi be-National Freedom Party (NFP) buvule igatsha elisha limi ngezinyawo emgwaqweni ngemuva kokuvinjwa ngamalungu e-ANC abala ukhasha nehholo lomphakathi.
Izolo bekuzovulwa ngokusemthethweni igatsha elisha le-NFP emijondolo yakuKennedy Road.
Kuze kwaphoqeleka ukuthi kubizwe amaphoyisa negatsha lavulelwa emgwaqweni ngoba amalungu e-ANC evale ihholo aphinde axosha abe-NFP.
Izolo isimo besishubile abantu bemi izixongololo beswebeza emakhoneni kungamalungu e-NFP kuphela abhiyozayo ecula amaculo athi: “Vele sesamvotela uNjinji”, amanye abenamagama ayiziswana abebhekiswe kuMengameli Jacob Zuma.
UMnuz Nhlanhla Khawula, oyilungu le-National Working Committee kwiNFP, uthe kabaqondi ukuthi amalungu e-ANC ebavimbelelani ukuthi bavule igatsha ngoba ihholo akade bezolisebenzisa ngelomphakathi.
Uthe bayicelile imvume kuMasipala weTheku ngisho nekhansela lendawo belingenankinga nokuthi basebenzise ihholo kodwa-ke bavinjwa ngamalungu ekomidi le-ANC kuleya ndawo.
“Silandele yonke imigomo yokuqasha ihholo, kasazi ukuthi yimiphi le amalungu ekomidi athi asiyilandelile. Batshele amalungu ethu ukuthi izinkunzi ezimbili azihlali esibayeni esisodwa. Asazi-ke noma kulesi sikhathi kusekhona abantu abangabekezelelani,” kusho uKhawula.
Uveze nokuthi ikhansela liye lacela ukuba banikezwe indawo evulekile ukuba bagcobe khona igatsha labo kodwa nalapho amalungu e-ANC abanqabela esho nokuthi mabahlehlise lo mcimbi.
Babe sebekhetha ukusebenzela emgwaqweni beqashwe ngamaphoyisa abehamba ngezimoto ezingamatekisi naleyo ebizwa uma kunodlame i-hippo.
UMnuz Vukile Qobozane, uSihlalo wegatsha le-NFP kuKennedy Road, uthe baphatheke kabi yilesi senzo samalungu e-ANC wathi kodwa noma bangasatshiswa ngeke basabe.
Uye wanxusa ukuthi ngokuzayo amalungu e-ANC ahloniphe ezinye izinhlangano.
UMnuz Sihle Zikalala we-ANC unxuse amalungu e-NFP ahlukumezekile ukuba axoxe lolu daba nezinhlaka ezifanelekile eqenjini lawo ukuze lona likhulumisane nelakhe.
“Besingakezwa ukuthi kukhona amalungu ethu anqabele ukuvulela abantu ihholo. Sicela labo bakhulume namaphoyisa noma bathinte izinhlaka ezifanelekile eqenjini ukuze sisebenzisane siluxazulule lolu daba,” kusho uZikalala.